Posted: Waxabajjii/June 22, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments (2)
Credits/Tags: Oromo Business, Qaanqee Show
Dr. Birhanemeskel, Hedduu Galatoomi!!
Yaanni kee oromo hunda kan halkanii guyyaa garaa nugugubu haa ta’u malee nama akka keeti gadi fageenyaan xiinxalee nuu dhiyesse hin aggarre. Kanaaf galata guddaa qabda!
Garuu ani aka nama tokkooti hamma wayyaaneen biyya abbaa keenya humnaan qabbatte jirtuti nageenyii fi dinagdeen oromo hinfoyya’a jedhee hinamanu. Dinagdee fi siyasa addaan baasuun hindanda’mu ijaa ta’ef.
Kanaaf qaroo akka kee karaa waraanaas nubarbaachisa. Nama Asmara ciisee “gooftaan keessan ana” jedhu otoo hintaane nama saba ofii ijaaree MIILA LAMAAN bira dhaabatee of kennee, lolee lolchiisu nubarbaachisa. Wayyaaneen qaroo ija oromo biyyya bulchuu danda’an kan aka kee kumaatamaan fixxee, hiitee, kaan immoo biyyaa ari’atteetu, harroota waan feete itti fe’atu qofa hambifattee saba keenyatti xabachaa jirti. Otoo waraana cimaa tokko qabaannee kun ta’uu hindanda’u.
Yoo OPDOn dhuguma waan oromof hojjechuu waan dandeessu siit fakkaate garuu qabxiileen gurguddaa kana gadii fi kan biraallee hafanii jiru.
1) Nageenyi yoo jiraate dinagdeen jirachuu danda’a. Kanaaf afeerraa mootummaa oromia malee polisiin federaalaa oromo tokko daangaa oromia keessatti qabuu, hidhuu fi ajjeesuuf mirga hinqabu! Kana yoo ta’e qofa nageenyi oromo egamuu kan danda’u.
2) Magaalonni oromia hundi issaanii (Finfinne dabalatee) mootummaa Oromia jala buluu qabu! Kanaaf dhiiga ilmaan keenyaa kumaatamaan dhabne. Oromian taaxii ilee otoo sassaabuu hindandeenye maqaadhumaaf “handhuura”, ykn “magaalaa gudditti” oromia jechuun fayidaa tokko hinqabu.
3) Ministeeroni, hooggantooni raayyaa ittisa biyyaa (generaloni) fi hojjettoonni mootummaa federala hundi lakkoofsa saba oromotin wal madaaluu qabu! (Yoo xinnaate 30-40% oromo ta’u qabu).
Famii Abdurahman Reply